Debian, Red Hat uye Iyo Gwaro Sisekelo Joinha iyo Anti Stallman Movement | Linux Vakapindwa muropa
Debian, Red Hat uye iyo Document Foundation inobatana neiyo anti Stallman kufamba
Kuenderera mberi ne nyaya yaStallman iyo yakakamura nharaunda, maintenant mamwe maheavyweight akabatana neanti anti Stallman uye vazivisa zvinzvimbo zvavo maererano nekuziviswa kwaRichard Stallman nezvekudzoka kwake kuFSF.
Uye ndizvo izvozvo PaDebian, vhoti yakajairika yatanga kutsigira anti-Stallman chikumbiro, chirongwa chekuvhota chakaburitswa, iine sarudzo chete yekutsigira chikumbiro chakanangana naStallman nechirongwa cheDebian sesangano.
Pakutanga, chirongwa cheDebian chakakumbirwa kusaina chikumbiro pachivande, kupfuura nzira yekuvhota yakajairika. Huwandu hweavo vakasaina tsamba vachitsigira Stallman hwakapfuura huwandu hweavo vakasaina tsamba vachipokana (vachitsigira Stallman - 2716, vachipesana - 2694).
Pamusoro pechirevo chekujoinha chikumbiro chakanangana naStallman ne STR Foundation, zvimwe zvikamu zviviri zvakawedzerwa kuvhoti: "munhu wese anofanirwa kusarudza kusaina chikumbiro kana kwete" uye "kumbira Stallman kuti arege basa nekuzvidira."
Zvakare, kutsoropodza kwaStallman akabatana neThe Document Foundation, iyo inotarisira kuvandudzwa kweLibreOffice office suite, iyo yakazivisa kumiswa kwekutora chikamu kwemumiriri yeFree Software Foundation pane yayo yekupa zano bhodhi uye kumiswa kwekushandira pamwe neFree Software Nheyo kusvikira mamiriro ezvinhu achinja.
Chikumbiro iyo yakasainwawo neCreative Commons, GNU Radio, OBS Project, uye SUSE. Zvichakadaro, vanhu vanosvika mazana maviri nemazana mana vakasaina tsamba yakavhurika vachida kusiya basa bhodhi rese revatungamiriri veFOS uye kubviswa kwaStallman, uye vanhu zviuru zviviri vakasaina tsamba yekutsigira Stallman.
Geoffrey Knauth, Mutungamiri weFree Open Source Foundation, akazivisa kuti akagadzirira kusiya chigaro uye kusiya basa kubva kubhodhi revatungamiriri nekukurumidza panongobuda vatungamiriri vatsva vanogona kuve nechokwadi chekuti basa reOpen Society Organisation rinoramba richienderana uye kuti zvido zvekutarisirwa kwemidziyo zvasangana.
Mozilla naTor vanobatana neyemberi mutsara wekudaidzira kuti Stallman abve muFree Software Foundation
Kune rumwe rutivi, Red Hat yakapesana naStallman uye yakazivisa kubhadharisa mari kweFree Software Foundation nezvose zvainoita. Nekudaro, sekureva kwedhata rakaburitswa neSiseko, Red Hat yakapedzisira kuibhadhara mu2019.
“Red Hat ndeye mupi wenguva-refu uye anobatsira muzvirongwa zvinotarisirwa neFree Software Foundation (FSF), nemazana evanobatsira uye nemamirioni emitsetse yekodhi. Tichifunga mamiriro ezvinhu ekutanga kusiya basa kwaRichard Stallman mu2019, Red Hat akatya kuziva kuti anga apinda muboka revatungamiriri veFSF. Saizvozvo, isu tinobva tamisa zvese Red Hat mari yeiyo FSF uye chero zviitiko zvakaitirwa neFSF. Pamusoro pezvo, vazhinji veRed Hat vanopa mari vatitaurira kuti havacharongeri kuenda kumitambo inoitwa kana kutsigirwa neFSF, uye isu tinovatsigira.
“Muna 2019, tinokumbira FSF Board of Directors kuti itore mukana wakawanikwa nekuenda kwaStallman kuti uende kune rimwe bhodhi rakasiyanasiyana. Iyo FSF yakangotora matanho mashoma mune ino nzira. Kudzoka kwaRichard Stallman kwakavhurazve maronda atakatarisira kupora zvishoma nezvishoma mushure mekuenda kwake. Isu tinotenda kuti kudzoreredza kuvimba kweiyo yemahara software nharaunda seyakazara, iyo FSF inofanirwa kuita yakakosha uye inogara shanduko kuhutongi hwayo.
“NeChitatu, bhodhi revatungamiriri veFSF rakatanga shanduko dzakasiyana dzine chekuita nehutongi hwehurongwa uye kugadzwa kwenhengo dzaro. Nekudaro, isu hatina chikonzero chekutenda kuti ichangoburwa FSF bhodhi chirevo chinoratidza kuzvipira kwakakosha kushanduko yakanaka. "Tinotarisira kushanda neFSF nevamwe kuti titangezve FSF sesangano rinoshanda uye rakavimbika rekushambadzira, zvichienderana nebasa rayo risingabatsiri."
Ndichiri kune rimwe divi, vagadziri vazhinji nevamiriri vanobatana neRed Hat vazivisa kuramba kwavo kutora chikamu muzviitiko zvakarongwa kana kutsigirwa neFree Software Foundation.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian, Red Hat uye iyo Document Foundation inobatana neiyo anti Stallman kufamba
Kuenderera nenyaya iyo YAKakurukura… ndapota… chiito HABER… naH.
Damn, meseji yangu yakatumirwa mushure meawa imwe ikazoenda?
Iwe hauna kutevedzera chero mutemo?
__ _ (ツ) _ / ¯
Shit Hat, ndine hurombo Red Hat uye vamwe vaifanira kutarisirwa, Debian, ini ndakaodzwa mwoyo. Ivo vanofanirwa kupa kudzoka kuzvinzvimbo zvebasa rekugovera kukuru uku. Vamwe vese vamwe vanoyamwa avo vanga vachisveta Gnu / Linux kwemakore mazhinji kana ivo chete chinhu chavari vamwe vanyengeri.
Fuck Debian, Red Hat uye Iyo Gwaro Sisekelo